तीनमहिने सुइका ३ साइड एफेक्ट : सकेसम्म प्रयोग नगरेको राम्रो | KHABAR VIDEO
Home / NEWS / तीनमहिने सुइका ३ साइड एफेक्ट : सकेसम्म प्रयोग नगरेको राम्रो
तीनमहिने सुइका ३ साइड एफेक्ट : सकेसम्म प्रयोग नगरेको राम्रो
about 7:40 PM Add Comment NEWS Edit
Comprehensive Abortion Care/ CAC) को १० दिने तालिम लिदैं गर्दा महिला स्वास्थ्य, परिवार नियोजन र गर्भपतन सम्बन्धी विभिन्न तरिका, फाइदा बेफाइदा लगायत यी सम्बन्धी विविध जानकारी र अनुभव सँगाल्ने मौका मैले पाइरहेको छु। मैले पाएका यिनै जानकारी र अनुभवहरुलाई यहाँ बाँड्ने प्रयास गरेको छु।
गर्भान्तरको लागि परिवार नियोजनका साधनहरु:
केहि वर्ष बिराएर बच्चा पाउनु आमा र बच्चाको स्वास्थ्यका लागि उत्तम छ।
परिवार नियोजन (Family Planning)
महिलाहरुको प्रजनन् अधिकार सुरक्षित राखी आमा र बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो हुने दम्पतीबीच कहिले र कतिवटा बच्चा जन्माउने भनी भविष्यका लागि तयार पारिएको परिवार बच्चा संख्यालाई परिवार नियोजन भनिन्छ। यसका विभिन्न आधुनिक उपायहरु निम्नानुसार छन्।
कण्डम के हो?
कण्डम पुरुषले प्रयोग गर्ने पातलो रबरको खोल हो। यसभित्र भएको चिल्लो पदार्थले गर्दा पुरुषले आफ्नो लिङमा सजिलैसँग लगाउन सक्छन्। हरेक पटकको सहवासमा यो प्रयोग गरेमा गर्भ हुनबाट बचाउँछ। साथै कण्डमको प्रयोग गरेमा यौनरोग तथा एच. आई. भी. एड्स हुनबाट पनि बचाउँछ।
कण्डमले कसरी गर्भ रोक्छ?
कण्डम लगाएर सहवास गरेमा पुरुषको लिङबाट निस्कने वीर्य कण्डमको टुप्पामा जम्मा भई शुक्रकीट महिलाको पाठेघरमा पुग्न पाउँदैन। जसले गर्दा महिला गर्भवती हुदैंनन्। कण्डम एकपटक प्रयोग गरेपछि फेरी प्रयोग गर्नुहुदैंन। लगाईसकेको कण्डम सुरक्षित ठाँउमा फ्याँक्ने वा जलाउने गर्नुपर्दछ।
पिल्स के हो?
पिल्स भनेको महिलाले खाने परिवार नियोजनको एक भरपर्दो अस्थायी साधन हो। यो छोटो अवधिका लागि गर्भान्तर गर्न चाहने महिलालाई धेरै नै उपयोगी छ। यो चक्की हरेक दिन नबिराई खाने गरेमा गर्भ रहँदैन। तर यो चक्की खान छोडेमा महिलाले तुरुन्तै गर्भधारण गर्न सक्छिन्।
पिल्स एक साइकल (एक पुरिया)मा जम्मा २८ चक्की हुन्छन्। २८ चक्कीहरुमध्ये २१ वटा सेतो र ७ वटा खैरो रंगको हुन्छ। महिलाले चक्की खान छाडेपछि उनको प्रजनन् शक्ति चाँडै नै फर्कन्छ। यसबाट उनको महिनावारी चक्रमा कुनै असर गर्दैन। यदि चक्की खान छाडेपछि पनि महिलाले गर्भधारण गर्न सकेनन् भने यो समस्या पिल्स छोडेको कारणबाट नभई अन्य कुनै कारण हुनसक्छ भनी सो कुराको जाँच गराउनुपर्छ।
पिल्सले कसरी गर्भ रोक्छ?
मिश्रित चक्की (पिल्स)ले डिम्ब परिपक्व भई निस्कने क्रियालाई रोक्छ। जसका कारणले मासिक डिम्ब निष्काशन हुन पाउँदैन। साथै पाठेघरबाट निस्कने तरल पदार्थलाई बाक्लो बनाउँछ। त्यसैगरी पाठेघरको भित्री भागलाई पातलो बनाई गर्भ रहनबाट रोक्दछ।
डिपोप्रोभेरा के हो?
संगीनी सुईको नामले परिचित यो सुई महिलाले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको एक भरपर्दो अस्थायी साधन हो। एउटा बच्चा पाइसकेपछि अर्को बच्चा केही वर्षको फरकमा पाउन चाहने महिलाले हरेक ३-३ महिनामा एक-एक पटक यो सुई लगाउने गरेमा गर्भ रहँदैन। एक पटक लगाएको सुईले तीन महिनासम्म काम गर्दछ।
डिपोप्रोभेराले कसरी गर्भ रोक्ने काम गर्छ?
१. महिलाको शरीरभित्रको डिम्बाशयबाट डिम्ब निस्कन दिँदैन।
२. पाठेघरको मुखमा हुने तरल पदार्थलाई बाक्लो बनाएर शुक्रकिटलाई पाठेघरमा पस्न दिँदैन।
३. पाठेघरभित्रको पत्रलाई पातलो बनाइदिन्छ जसले गर्दा डिम्ब टाँसिन पाउँदैन।
नरप्लान्ट के हो?
नरप्लान्ट महिलाले प्रयोग गर्ने परिवार नियोजनको अति भरपर्दो अस्थायी साधन हो। यो महिलाको पाखुरामा राखिने गर्भनिरोधक साधन हो। यसले सात वर्षसम्म गर्भ रहन दिँदैन। यो नरम रबरजस्तो वस्तुले बनेको हुन्छ। यसमा सिन्थेटिक प्रोजेस्टेरोन (लेभोनरजेस्ट्रोल/Levonorgestrol) हर्मोन भरिएको हुन्छ। यी ६ वटा पातला लचिला क्याप्सुलहरु सलाइको काँटी जस्ता हुन्छन्। यो महिलाको पाखुराको माथिल्लो भित्री भागको छालामुनि तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले राखीदिन्छन्। यो राखेको २४-४८ घण्टाभित्र काम गर्न थाल्दछ। साथै यसलाई निकालेपछि महिलाको प्रजनन् शक्ति तुरुन्तै फर्केर सामान्य रुपमा काम गर्न थाल्दछ।
नरप्लान्टले कसरी गर्भ रोक्छ?
यी क्याप्सुलहरु महिलाको पाखुराको माथिल्लो भित्री भागको छालामुनि राखिन्छ। यो हर्मोन क्रमश: रसाएर शरीर भित्र रगतमा मिसिन्छ।
1. क्याप्सुलको मुखबाट निस्कने स्रावलाई बाक्लो र थोरै बनाइदिन्छ र शुक्रकीटलाई छिर्न दिँदैन।
2. पाठेघरको भित्री पत्रलाई (Endometrium/इण्डोमेट्रियम)पातलो बनाउँछ।
3. डिम्ब निष्काशन प्रक्रियालाई दबाएर (Suppression/सप्रेशन) राख्छ।
नरप्लान्ट लगाएको सात वर्षपछि स्वास्थ्य संस्थामा गई झिक्नुपर्छ।
कपर-टी के हो?
लामो समयसम्म गर्भ निरोध गर्नको लागि महिलाको पाठेघरमा राखिने परिवार नियोजनको अस्थायी साधनलाई कपर-टी भनिन्छ। यो अंग्रेजी अक्षर 'T' आकारको हुन्छ र तीनैतिर तामाको मसिनो तारले बेरिएको हुन्छ। यसको तल्लो टुप्पोमा सेतो मसिनो धागो हुन्छ र धागो पाठेघरको मुख बाहिरसम्म निस्किएको हुन्छ जुन महिलाले छामेर थाहा पाउन सकिन्छ। यो तालिमप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले महिलाको पाठेघरमा राखिदिन्छन्। एकपटक राखेको कपर-टीले १२ वर्षसम्म गर्भ रहन दिँदैन। सन्तानको रहर पुगेका वा लामो समयसम्म बच्चा पाउन नचाहने महिलाको लागि यो उपयुक्त र निकै नै भरपर्दो साधन हो। यसमा कुनै किसिमको रासायनिक पदार्थ नहुने भएकोले यसले शरीरलाई कुनै असर गर्दैन।
कपर-टीले कसरी गर्भ रोक्छ?
कपर-टी लाई महिलाको पाठेघरमा राखेपछि शुक्रकीटलाई डिम्बसँग मिल्न दिँदैन अथवा डिम्बलाई पाठेघरमा बस्न दिँदैन।
आफ्नो लागि कुन परिवार नियोजनको साधन उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीसँग सल्लाह गरेर निर्णय गर्न सकिन्छ।